Ukuhlukanisa Phakathi Kwabaholi Bangempela Nabamanga, Naphakathi Kwabelusi Bangempela Nabamanga | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Amaqiniso Nemibono Amakholwa Amasha Okufanele Aqale Ahlome Ngakho
Isahluko 1 Kufanele Wazi Ukuthi NguNkulunkulu USomandla Kuphela OnguNkulunkulu Oyedwa Wangempela Owadala Amazulu Nomhlaba Nakho Konke Okukukho
1. UNkulunkulu USomandla UnguNkulunkulu Oyedwa Obusa Phezu Kwezinto Zonke
2. UNkulunkulu USomandla UnguJesu Obuyile
3. Insindiso Ingeza Kuphela Ngokukholwa KuNkulunkulu USomandla
Isahluko 2 Kufanele Wazi Amaqiniso Amagama KaNkulunkulu
1. Kungani uNkulunkulu Ethatha Amagama, futhi Kungenzeka Ukuthi Igama Elilodwa Limele Ukuphelela KukaNkulunkulu?
2. Kungani UNkulunkulu Ebizwa Ngamagama Ehlukene Ezinkathini Ezehlukene?
Isahluko 3 Kufanele Wazi Amaqiniso Ngezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu
1. Uyini Umsebenzi Wokuphatha Isintu?
2. Kufanele Wazi Inhloso Yezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu
3. Ukwazi Inhloso Nokubaluleka Kwaleso Naleso Sezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu
4. Ubudlelwane Phakathi Kwaleso Naleso Sezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu
Isahluko 4 Kufanele Wazi Amaqiniso Omsebenzi KaNkulunkulu Wezinsuku Zokugcina
1. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wamazwi
2. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokunqoba
4. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokuvivinya Nokucwenga
5. Kufanele Ukholwe Kanjani KuNkulunkulu Ukuze Usindiswe futhi Upheleliswe?
Isahluko 5 Kufanele Wazi Amaqiniso Ngokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu
1. Kuyini Ukuba Sesimweni Somuntu? Iyini Ingqikithi Yokuba sesimweni Somuntu?
2. Kufanele Wazi Ukubaluleka KukaNkulunkulu Obe Yinyama.
3. Umehluko Phakathi Komsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Nomsebenzi WoMoya
Isahluko 6 Izimo Eziningi Zokwahlukanisa Okufanele Ube Nazo Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu
5. Umehluko Phakathi Kokulandela UNkulunkulu Nokulandela Abantu.
6. Ukuhlukanisa Phakathi Kwabaholi Bangempela Nabamanga, Naphakathi Kwabelusi Bangempela Nabamanga
7. Umehluko Phakathi Kwezenzo Zangaphandle Ezinhle Nezinguquko Esimweni.
Isahluko 7 Ezinye Izingxenye Eziningana Zamaqiniso Emancane Okufanele Aqondwe Ngamakholwa Amasha
1. Kufanele Wazi Umsuka Wokuphikisa Kwabantu Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha Ekukholweni Kwabo KuNkulunkulu
2. Ekuthungatheni Indlela Yangempela, Kufanele Ube Nengqondo.
3. Ekukholweni KuNkulunkulu, Kufanele Wakhe Ubudlelwane Obejwayelekile NoNkulunkulu.
4. Ukuziphatha Kahle Okungcwele Amakholwa KaNkulunkulu Okufanele Abe Nakho.
5. Ukukholwa KuNkulunkulu Akufanele Kube Ngokokufuna Ukuthula Nezibusiso Kuphela.
Isahluko 8 Iziphetho Zezinhlobo Ezahlekene Zabantu Nesithembiso SikaNkulunkulu Kumuntu
6. Uwubona Kanjani Umehluko Phakathi Kwabaholi Bangempela Nabamanga, Nabelusi Bangempela Nabamanga?
Labo abangawulandeli umsebenzi wamanje kaMoya Ongcwele abakangeni emsebenzini wamazwi kaNkulunkulu, futhi noma bengasebenza kangakanani, noma bengahlupheka kangakanani, noma bengaba matasa kangakanani, konke lokho akusho lutho kuNkulunkulu, futhi ngeke abancome. Namuhla, bonke laba abalandela amazwi kaNkulunkulu basendleleni eyodwa noMoya Ongcwele; labo abangawazi amazwi kaNkulunkulu bangaphandle kwendlela kaMoya Ongcwele, kanti futhi abantu abanjalo uNkulunkulu akajabuli ngabo. Umsebenzi ohlukene namazwi kaMoya Ongcwele ngumsebenzi wenyama, wemiqondo, futhi awukwazi ukuhambisana nentando kaNkulunkulu. Uma abantu bephila phakathi komqondo wenkolo, kusho ukuthi abakwazi ukwenza nanoma yini ehambisana nentando kaNkulunkulu, yize besebenzela uNkulunkulu, bamsebenzela ingakashintshi indlela abacabanga ngayo, futhi abakwazi ukusebenza ngokuhambisana nentando kaNkulunkulu. Labo abangakwazi ukulandela umsebenzi kaMoya Ongcwele abayiqondi intando kaNkulunkulu, kanti labo abangayiqondi intando kaNkulunkulu ngeke bamsebenzele uNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna umsebenzi ofuna inhliziyo yaKhe; akafuni umsebenzi womqondo nenyama. Uma abantu bengakwazi ukulandela izinyathelo zomsebenzi kaMoya Ongcwele, kusho ukuthi baphila ngemiqondo, kanti ukusebenza kwabantu abafana nalaba kuyaphazamisa. Ukusebenza okunjalo kuphambene noNkulunkulu, ngalokho labo abangakwazi ukulandela izinyathelo zikaNkulunkulu nakanjani baphikisana noNkulunkulu, futhi akunakwenzeka bavumelane noNkulunkulu. “Ukulandela umsebenzi kaMoya Ongcwele” kusho ukuqonda intando kaNkulunkulu namuhla, ukwazi ukwenza ngokwezidingo zamanje zikaNkulunkulu, ukwazi ukuthobela nokulandela uNkulunkulu namuhla, nokungena ngokuhambisana namazwi amuva kaNkulunkulu. Lona ngumuntu olandela umsebenzi kaMoya Ongcwele futhi osendleleni kaMoya Ongcwele. Abantu abafana nalaba akukona ukuthi bafanelwe ukuthola ukubongwa nguNkulunkulu nokubona uNkulunkulu, kodwa abazokwazi isimo sikaNkulunkulu emsebenzini wakamuva kaNkulunkulu, futhi bazokwazi imiqondo yabantu nokungathobeki, nendalo yomuntu kanye nesiqu, emsebenzini waKhe wakamuva; futhi, bayakwazi ukuthi bashintshe kancane kancane esimweni sabo ngenkathi besebenza. Ngabantu abafana nalaba kuphela abakwaziyo ukuzuza uNkulunkulu, nasebethole indlela yeqiniso. Labo abasuswa ngomsebenzi kaMoya Ongcwele abantu abangakwazi ukulandela umsebenzi wakamuva kaNkulunkulu, abahlamuka umsebenzi wakamuva kaNkulunkulu. Ukuthi abantu abafana nalaba baphikisa uNkulunkulu ngokusobala kungenxa yokuthi umfanekiso kaNkulunkulu awufani nalona abazenzele wona emiqondweni yabo—ngenxa yokuthi baphikisa uNkulunkulu ngokusobala bahlulele uNkulunkulu, okuholela ekutheni uNkulunkulu abazonde futhi abachithe.
Abantu abaningi abaphikisani yini noNkulunkulu futhi bavimbe umsebenzi woMoya oNgcwele ngoba bengazi umsebenzi kaNkulunkulu onhlobonhlobo futhi ohlukahlukene, ngaphezu kwalokho, banengcosana yolwazi nemfundiso abakala ngayo umsebenzi woMoya oNgcwele? Nakuba abadlule kukho laba bantu kukha phezulu, bayaqhosha futhi bathanda ukuzitika ngokwemvelo, futhi babuka umsebenzi woMoya oNgcwele ngokudelela bashaya indiva ukuqondisa koMoya oNgcwele futhi, ngaphezu kwalokho, basebenzisa izinkulumo zabo ezindala neziyize ukuqinisekisa umsebenzi woMoya oNgcwele. Bayazenzisa, futhi banelisekile ngokuphelele ngolwazi lwabo uqobo kanye nokufunda kwabo, nokuthi bayakwazi ukuhamba banqamule umhlaba. Abantu abanjalo akubona labo abazondwayo futhi abalahlwe uMoya oNgcwele futhi ngeke yini bakhishwe yinkathi entsha? Akubona labo abeza phambi kukaNkulunkulu bamphikise imbaba abantu abancinyane ababona eduze kuphela, abazama ukumane bakhombise ukuthi bahlakaniphe kangakanani? Ngolwazi oluwubala lweBhayibheli, bazama ukugxamalaza “imikhakha yezemfundo” yomhlaba, benemfundiso ekha phezulu nje abayifundisa abantu, bazama ukuphindisela emuva umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi bazame ukuwenza uzungeze lapho inqubo yabo yokucabanga ikhona, futhi, njengoba benokubukela eduze nje, bazama ukujeqeza kanye nje umsebenzi kaNkulunkulu weminyaka eyizi-6,000. Ingabe la bantu banaso isizathu abakhulumela kuso? Empeleni, lapho ulwazi lwabantu lulukhulu ngoNkulunkulu, yilapho bephuza ukwahlulela umsebenzi Wakhe. Ngaphezu kwalokho, bakhuluma kancane kuphela ngomsebenzi kaNkulunkulu namuhla, kodwa abanawo amawala ekwahluleleni kwabo. Lapho kukuncane abantu abakwaziyo ngoNkulunkulu, yilapho beqhosha khona futhi benokuzethemba okweqile, futhi yilapho bememezela ngokungabi namahloni okukhulu ubukhona bukaNkulunkulu—kepha bakhuluma okucatshangwayo nje kuphela, futhi abalethi ubufakazi bangempela. Abantu abanjalo abalusizo kwalutho. Labo ababona umsebenzi woMoya oNgcwele njengomdlalo abanangqondo! Labo abangaqapheli uma behlangabezana nomsebenzi omusha woMoya oNgcwele, abakhuluma noma ikanjani nje, abasheshayo ukwehlulela, abavumela isazela sabo semvelo ukuphika ukulunga komsebenzi woMoya oNgcwele, nabaphinde badelele futhi bawuhlambalaze—abantu abangahloniphi kanjalo anganalwazi ngomsebenzi woMoya oNgcwele na? Akubona, ngaphezu kwalokho, labo bokuqhosha, abaziqhenyayo ngokwemvelo, futhi abangaphatheki? Noma ngabe usuku luyafika lapho abantu abanjalo bemukela umsebenzi omusha woMoya oNgcwele, nakalokhu, uNkulunkulu ngeke ababekezelele. Ababukeli phansi labo abasebenzela uNkulunkulu nje kuphela, kodwa bahlambalaza uNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Abantu abanobuwula kanje ngeke baxolelwe, noma kulenkathi noma enkathini ezayo futhi bayobhubha ingunaphakade esihogweni! Abantu abanjalo, abangahloniphi, abathanda ukuzitika bayazenzisa ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu, futhi lapho beqhubeka nokwenze njalo, yilapho bengazithola bephula izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha. Akuve bonke labo abaqhoshayo, abangalawuliwe ngokwemvelo, futhi abangakaze bahloniphe muntu, bonke behamba le ndlela? Abaphikisani noNkulunkulu usuku nosuku, Yena ohlala emusha futhi engagugi?
Umuntu onjalo ugcina umoya wobutha njalo mayelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, akaze akhombise nencane inhloso yokuzithoba, futhi akakaze alalele noma azehlise noma azithobe. Uyazikhukhumeza phambi kwabanye kanti akazithobi nhlobo komunye. Phambi kukaNkulunkulu uzibona enguchwepheshe ekushumayeleni izwi futhi enekhono kakhulu ekusebenzeni kwabanye. Akalingi alahle amagugu asenawo, kodwa uwathatha njengezinto zomndeni eziyigugu ezivela kokhokho okufanele zikhonzwe, kushunyayelwe ngazo kwabanye, futhi usebenzisa ukufundisa lezo ziphukuphuku ezimthanda kakhulu. Impela bakhona abantu abanje ebandleni. Kungashiwo ukuthi “bangamaqhawe angenakunqotshwa,” isizukulwane emuva kwesizukulwane bayavakasha endlini kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukushumayela izwi (imfundiso) kungumsebenzi wabo osemqoka. Unyaka nonyaka, isizukulwane emuva kwesinye, bawenza ngomdlandla umsebenzi wabo “ocwebileyo nongaphiliseki”. Abekho abalinga ukubathinta futhi abekho abalinga ukuthi babasole obala. Baphenduka “amakhosi” endlini kaNkulunkulu, bephithizela ngenkathi bebusa phezu kwabanye iminyaka ngeminyaka.
Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ujabulela noma yini ofuna ukuyenza, nokuthi uzonda noma yini ongafuni ukuyenza, futhi uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo emsebenzini wakho. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni, isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane; kunalokho, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi lokhu kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngale ndlela, ngaphakathi uzozakhela imithetho yokukhonza uNkulunkulu ngokuyinhloko esekelwe ebuntwini bakho, nasolwazini oluthole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu kuyisifundo esivela olwazini lwabantu. Kuwumbono womuntu ngokuphila. Abantu abanjengalaba bafana nabaFarisi kanye nabaholi benkolo.
kwesithi “Indlela Yokukhonza Yenkolo Kumelwe Ivalwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Umsebenzi osemqondweni womuntu ufinyelwa kalula umuntu. Abefundisi nabaholi bezenkolo, isibonelo, bathembele eziphiweni nasezikhundleni zabo uma benza imisebenzi yabo. Abantu ababalandela isikhathi eside batheleleka ngeziphiwo zabo futhi babe negalelo kubo ngokunye abakwenzayo. Bagxila eziphiweni zabantu, namakhono kanye nolwazi, futhi bagxila kwezinye izinto ezingasizo ezemvelo kanye nenqwaba yezimfundiso ezaziwayo nezingasizo ezeqiniso (nakanjani, lezi zimfundiso ezaziwayo akufinyeleleki kuzo). Abagxili ekushintsheni ezimilo zabantu, kodwa bagxila ekuqeqesheni amakhono abantu okushumayela nawokusebenza, bandisa ulwazi lwabantu kanye nezimfundiso zezenkolo kabanzi. Abagxili ekutheni izimilo zabantu zishintsha kanjani noma ukuthi abantu baliqonda kangakanani iqiniso. Abazikhathazi ngokubalulekile kubantu, futhi abazami nokwazi izimo zabantu ezejwayelekile nezingajwayelekile. Abahlangabezani nemizwa yabantu noma abadaluli imizwa yabo, kube abalungisi umonakalo noma inkohlakalo ekubo. Abantu abaningi ababalandelayo basebenza ngeziphiwo zabo zemvelo, futhi lokho abakuvezayo kuwulwazi kanye neqiniso elingacacile lezenkolo, eliqhelelene nokwenzekayo futhi akukwazi nhlobo ukuphilisa abantu. Empeleni, okubalulekile ngomsebenzi wabo ukuthuthukisa amathalente, ukusimamisa umuntu ongenalutho abe umfundi ogogodile onethalente lokushumayela ogcina eseya kosebenza futhi ahole.
kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Uyakwazi ukukhuluma izilimi eziningi njengesihlabathi esisebhishi, kodwa alukho kuzo olunendlela yangempela. Kulokhu, awubakhohlisi yini abantu? Awukhulumeli yini safuthi kodwa ungenzi? Ukwenza ngale ndlela kuyabalimaza abantu! Ukuphakama kwemfundiso, kusho ukuphenduka ize kokungokoqobo, futhi ayanda namathuba okungakwazi ukuletha abantu kokungokoqobo; ukuphakama kwemfundiso, kukwenza ungcolise futhi umelane noNkulunkulu. Ungaphathi izimfundiso eziphakeme kakhulu njengomcebo oyigugu; ziyalimaza futhi azinamsebenzi! Mhlawumbe abanye abantu bayakwazi ukukhuluma ngezimfundiso eziphakeme kakhulu—kodwa izimfundiso ezinjalo azinalutho olungokoqobo, ngoba laba bantu abakaze babhekana nazo ngqo, ngakho abanandlela abangayenza. Labo bantu abakwazi ukuhambisa umuntu emgudwini ofanele, futhi bayogcina ngokuphambukisa abantu. Akubona yini abantu abalimazayo laba? Okungenani, kumele ukwazi ukuxazulula izinkinga zamanje futhi uvumele abantu bafinyelele ukungena; yilokhu kuphela okusebenza njengokuzinikela, futhi kulapho kuphela lapho uyokwazi khona ukusebenzela uNkulunkulu. Ungahlale ukhuluma okuphakeme, amazwi akhazimulayo, futhi ungababophi abantu ubenze bakulalele ngezenzo zakho eziningi ezingafanele. Ukwenza kanjalo ngeke kube namphumela, kungandisa kuphela ukudideka kwabantu. Ukuhola abantu ngale ndlela kuyokwakha izingxenye eziningi zomthetho, okuyokwenza abantu bakuzonde. Leli iphutha lomuntu, futhi alithandeki ngempela.
kwesithi “Gxila Kakhulu Kokungokoqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ulwazi lwenu lungakwazi ukusiza abantu isikhashana nje. Ngokuhamba kwesikhathi, uma uqhubeka usho into efanayo, abanye abantu bazokwazi ukubona; bazothi awuzinzile kakhulu, untula kakhulu ekujuleni. Akukho ongakwenza ngaphandle kokuzama ukudukisa abantu ngokukhuluma izimfundiso. Uma uhlale uqhubeka ukhuluma kanje, labo abangaphansi kwakho bazolandela izindlela, izinyathelo nesibonelo sokukholwa kuNkulunkulu nokwazi, futhi bazokwenza lawo mazwi nezimfundiso, ekugcineni, njengoba ukhuluma ngale ndlela, bayosebenzisa wena njengesibonelo. Ukhuluma izimfundiso, lapho uhola abantu, futhi labo abangaphansi kwakho bazofunda izimfundiso kuwe, futhi njengoba izinto ziqhubeka uyobe uthathe indlela engafanele. Labo abangaphansi kwakho balandela indlela yakho, futhi bonke bafunda kuwe bese belandela wena…. Buka abaholi bayo yonke imibuso namaqembu. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu.” Badinga imvume yomuntu othile ukuze bakholwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo? Baphenduke ini labo baholi? Ingabe abakabi yini abaFarisi, abelusi bamanga, abaphikikrestu, nezikhubekiso ekwamukeleni kwabantu indlela yeqiniso?
kwesithi “Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe
“Ukubukeza kwakho iqiniso” empeleni akwenzelwa ukwenza abantu bathole ukuphila noma bathole izinguquko ezimweni zabo. Kunalokho, kwenziwa ukuze abantu bafunde ulwazi nezimfundiso ezithile ezingaphakathi eqinisweni. Babonakala sengathi bayayiqonda inhloso engemuva komsebenzi kaNkulunkulu, ngesikhathi empeleni befunde kuphela amazwi athile emfundiso. Abawuqondi umqondo ocashile weqiniso, futhi akwehlukile ekufundeni imfundiso yenkolo noma ukufunda uBhayibheli. Uqoqa lezi zincwadi noma leyo mibhalo, bese uba nale ngxenye yemfundiso noma leyo ngxenye yolwazi. Uyisikhulumi esisezingeni eliphezulu sezimfundiso—kodwa kwenzekani uma usuqedile ukukhuluma? Abantu khona-ke abakwazi ukuzwa, abanakho ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu futhi abanakho ukuziqonda kwabona. Ekugcineni, zonke izinto abayobe bezizuzile yizindinganiso zokwenza nje nemithetho. … Ngokubuza umbuzo emva komunye ngalawo mazwi, bese uphendula, wakha uhlaka noma iqoqo lokubalulekile, ucabanga ukuthi labo abangaphansi bangakwazi kalula ukuwaqonda. Ngaphandle kokuba lula ukuwakhumbula, bayacacelwa ngale mibuzo bewabuka nje, futhi ucabanga ukuthi kuhle ukwenza izinto ngale ndlela. Kodwa lokho abakuqondayo akuyona incazelo ecashile yangempela yeqiniso; kuyehluka kokungokoqobo futhi kungamazwi nje emfundiso. Ngakho bekuyoba ngcono ukuba awuzenzanga nhlobo lezi zinto. Wenza lezi zinto ukuholela abantu ekuqondeni ulwazi futhi bafunde ulwazi. Ungenisa abanye ezimfundisweni, enkolweni, futhi ubenze balandele uNkulunkulu futhi bakholwe kuNkulunkulu ngaphakathi kwezimfundiso zenkolo. Awufani-ke nje noPawulu? … Ekugcineni bebezolethwa endaweni lapho bengeke bezwe khona iqiniso futhi bengeke bezwe khona izwi likaNkulunkulu, indawo lapho bengazihlomisa kuphela futhi baxoxe ngezimfundiso nalapho bengakwazi khona ukuqonda uNkulunkulu. Konke abebengakukhuluma-ke bekuyoba yizimfundiso ezizwakala kamnandi, izimfundiso ezilungile, kodwa bekungeke kube khona okungokoqobo ngaphakathi kwabo futhi bebengeke babe nendlela abangayihamba, lolu hlobo lokuhola ngempela lwenza umonakalo omkhulu!
kwesithi “Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe
Abanye abantu bahloma ngamaqiniso athile nje kuphela okusetshenziswa ezimweni eziphuthumayo noma ukuze bangazinaki bona kanye nokuthi basize abanye, hhayi ukuze baxazulule izinkinga zabo siqu; laba sibabiza ngokuthi “abantu abazidelayo.” Babheka abanye njengopopayi beqiniso kanti bona banjengamakhosi eqiniso, afundisa abanye ukuba babambelele ngokuqinile eqinisweni futhi benze okuthile ngalo, kuyilapho bona beyizibukeli ezisemaceleni ezingenzi lutho—luhlobo luni lwabantu lolu? Bahlome ngamazwi athile eqiniso ukuze bafundise abanye kuphela, kuyilapho bona bangenzi lutho lokuzivikela ukuba bangayi ekubhujisweni kwabo—akuve kudabukisa! Uma amazwi abo angasiza abanye, kungani engabasizi bona? Kufanele sibabize ngokuthi abazenzisi abangenalo iqiniso langempela. Banikeza abanye amazwi eqiniso futhi bacele abanye ukuba bawenze, kodwa bona bangenzi mzamo wokuthi bawenze—ingabe lokho akwenzi benyanyeke yini? Empeleni bona abanakulenza, kodwa baphoqelela abanye ukuba benze amazwi eqiniso—yeka ukuthi lokhu kuyindlela enonya kanjani! Abasebenzisi into yangempela ukuze basize abanye; abanikezi abanye into ephuma enhliziyweni enothando; bamane badukisa abantu futhi bayabonakalisa. Uma lokhu kuqhubeka—kumuntu ngamunye owedlulisela amazwi eqiniso komunye—ingabe wonke umuntu ngeke yini agcine ekhuluma amazwi eqiniso kuphela kodwa engakwazi ukulenza iqiniso?
kwesithi “Labo Abathanda Iqiniso Banendlela Abayilandelayo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe
kwesithi “Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe
Kungani ngithi labo abasemhlabeni wezenkolo abakholelwa kuNkulunkulu futhi bangabenzi bobubi, abawuhlobo olufanayo noSathane? Uma ngithi bangabenzi bobubi, kungenxa yokuthi abayiqondi intando kaNkulunkulu noma babone ubuhlakani Bakhe. UNkulunkulu akawuvezi umsebenzi Wakhe kubo nhlobo; bangabantu abayizimpumputhe, abangayiboni imisebenzi kaNkulunkulu. Yilabo abashiywe nguNkulunkulu, abanganakekelwe futhi abangavikelwe uNkulunkulu, ingasaphathwa eyomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Labo abangenawo umsebenzi kaNkulunkulu bangabenzi bobubi futhi bamelene noNkulunkulu.
Umthwalo wabasebenzi ukwenza umsebenzi wabo futhi bahole amabandla ngokusekelwe entandweni kaNkulunkulu futhi nangokuhambisana nezidingo kanye nezinhlelo zikaNkulunkulu. Umsebenzi ofana nalona ubusisiwe nguNkulunkulu. Uma abasebenzi bengenawo umqondo ofana nalo, futhi bephula intando kaNkulunkulu ngokwenza izinto ngendlela yabo, bemi endaweni yomalusi futhi befundisa abantu ngokufisa kwabo, befundisa abantu imiccabango, imibono, nezimfundiso zabo futhi benze ukuba abanye bazamukele, khona-ke abasebenzi abanjalo sebephenduke abelusi bamanga. Kunezibonelo eziningi zabasebenzi abaphenduka abelusi bamanga, futhi ingxenye enkulu seyikhishiwe nguNkulunkulu esigabeni ngasinye somsebenzi Wakhe. UNkulunkulu wake wathi kuzo zonke izinkathi kunabantu abaningi abakhonza uNkulunkulu kodwa futhi bemphikisa, kuze kube yilapho benza abanye babalalele futhi babakhulekele njengokungathi banguNkulunkulu. Lokhu kungukubonakaliswa "kwabelusi bamanga." Kufanele sonke sikuthathe lokhu njengesexwayiso; abasebenzi kumele bagxile ekuguqukeni kwesimo, futhi uma benganaki futhi beyekelele, khona-ke kulula kakhulu ukuba babe abelusi bamanga. Umsebenzi wabelusi bamanga ugxile kakhulu ekuholeni abantu njengokubona kwabo abelusi bamanga. Konke abakwenzayo, bathi, bakufune kungokuklama kwabo, futhi bakuthatha lokhu njengamaqiniso amsulwa kunawo wonke, futhi bacabange ukuthi bangafundisa abantu ukuba babe ngabantu futhi bavumele abantu ukuba bathole iqiniso ngokuklama kwabo. Lezi yizibonakaliso zokuziphakamisa okukhulu kwabelusi bamanga. Labo abanengqondo ngempela, lapho bekholwa ukuthi basendleleni eyiyo bebezofuna ikakhulukazi ukuhambisa iqiniso, futhi banikele imiqondo yabo ekulaleleni imibono nolwazi olwahlukele lwabanye ukuze baqinisekise ukuthi konke lokho abakuzwile kuyiqiniso na. Bonke labo abaye bathola ukuthenwa nguNkulunkulu kanye nokulungiswa Nguye kufanele bakwazi ukubeka eceleni okunye ukuzazi nokuziphakamisa kwabo. Lapho besebenza, bayaqikelela ezinyathelweni zabo ukuze bagweme ukwephula intando kaNkulunkulu nokuthatha indlela engafanele. Imiphumela yabo yokuba abelusi bamanga akumnandi ukuyicabanga. Bonke abasebenzi banemikhuba yabo, bonke banamathiyori abanisela ngawo abantu; eqinisweni, akekho owazi ngokucacile ukuthi lingakanani iqiniso noma ukubaluleka kulokho abakholwa yiko. Abantu abanako ukuziqaphela, abanako ukujula noma ukuzindla kabanzi ngolwazi lwabo lweqiniso, futhi bakhetha nje ngokunganaki ezinye izinto ezingenamsebenzi walutho bese beziphatha njengamagugu okufanele anikezwe nabanye abantu. Ingabe le mikhuba ayiyona inkomba yomalusi wamanga? Ingabe lokhu akulimazi abanye kanye nabo uqobo? Kungakhathaliseki ukuthi abelusi bamanga benza umsebenzi ongakanani, abakwazi ukuletha abantu phambi kukaNkulunkulu futhi babenze bakwazi ukumazi nokumlalela uNkulunkulu. Konke okukhishwa abelusi bamanga amazwi nje kanye nezimfundiso, nemicabango kanye nemibono, futhi ayikho into ephazamisa umsebenzi kaNkulunkulu noma ewuphikisayo ngaphezu kwaleyo.
kusuka ekuhlanganyeleni okuvela kumfowethu
Inkonzo ngokwezindlela zenkolo ichaza ukwenza konke ngokuvumelana nezinqubo zezenkolo zendabuko nemikhuba yokukhonza, ukugcina ngokweqile imikhosi ehlukahlukene yenkolo, nokuhola kuphela abantu ngokuvumelana nolwazi lweBhayibheli. Uma ubhekile, kubonakala kunamandla, futhi kubonakala kuyinkolo, kufanelana ngokuphelele nemibono yabantu, futhi akunakho ukuphikisana. Kodwa akunawo nhlobo umsebenzi kaMoya oNgcwele, lokho okushunyayelwayo akulutho ngaphandle kwezimfundiso nje zenkolo nolwazi lweBhayibheli, ligcwele imibono yezenkolo, akunalutho okungukukhanyiselwa kukaMoya oNgcwele, futhi imihlangano yakhona yomile futhi ayinakuphila. Ngenkonzo enjengale, njengoba iminyaka iqhubeka abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo namanje balokhu behlala belahlekelwe yiqiniso, abanalo ulwazi ngoNkulunkulu noma ukulalela uNkulunkulu, futhi abakangeni endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu—ngoba lokhu abantu abakuphishekelayo akuyona insindiso kodwa umusa nezibusiso, kangangokuthi akunazinguquko ezimweni zabo zokuphila. Emva kokusebenza iminyaka eminingana, laba bantu basalokhu bengenalutho, akukho abangaluveza. Lokhu kungumphumela wenkonzo ngokwezindlela zenkolo. Ngokusobala, abantu abanje abakhonza uNkulunkulu abawazi umsebenzi kaNkulunkulu, abayiqondi intando kaNkulunkulu, futhi abazi ukuthi kusho ukuthini ukusebenzisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele. Empeleni kunjengempumputhe idonsa enye impumputhe, baholela abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo ekulahlekeni, njengoba abaFarisi bekholwa kuNkulunkulu kodwa futhi bemelane noNkulunkulu, abamazi uNkulunkulu, futhi abakwazi nhlobo ukuzuza insindiso kaNkulunkulu.
kusuka esihlokweni esithi “Kungokuqala Ngokungena Endleleni Efanele Kuphela Okungenza Umuntu Ahambe Endleleni Elungile Yokusebenzela UNkulunkulu” kwethi Imilando Evelele Ekhethiwe Yamalungiselelo Omsebenzi WeBandla LikaNkulunkulu USomandla
Abefundisi bomphakathi wenkolo basebenzisa wonke amathuba ukubukisa ngezinga lolwazi lwabo futhi bazenze bebonakala benokuzinikela. Inhloso yabo ukwenza abantu babathathele phezulu futhi bakhuleke kubo, futhi basebenzisa isithombe sabo ukuheha abantu ukuba babalalele futhi babalandele, ngomphumela wokuthi baholela abantu ekukhulekeleni ulwazi lweBhayibheli, ukukhulekela isikhundla namandla, nokukhulekela ubuchwepheshe bokushumayela. Ngale ndlela, ngesinyathelo ngasinye ngasinye baholela abantu endleleni yokuphikisana noNkulunkulu. Labo abaholwa ngomphikukristu bakholwa kuNkulunkulu ongacacile, bahamba phambili ekukhulumeni izimfundiso ezingenalutho nezincencezayo, futhi banekhono lobuzenzisi, futhi bonke bakholwa kuNkulunkulu kodwa bayaphikisa futhi bahlubuke uNkulunkulu. Akungabazeki ukuthi indlela abaholi bamanga kanye nabomphikukristu abasebenza ngayo—le abasebenzela uNkulunkulu baphinde bamphikise kuyona—iyingozi kakhulu kubantu.
kusuka esihlokweni esithi “Ukuqaphela AbaphikuKristu kubaluleke Kakhulu” kwethi Imilando Evelele Ekhethiwe Yamalungiselelo Omsebenzi WeBandla LikaNkulunkulu USomandla
Okwedlule：Umehluko Phakathi Kokulandela UNkulunkulu Nokulandela Abantu.
Okulandelayo：Umehluko Phakathi Kwezenzo Zangaphandle Ezinhle Nezinguquko Esimweni.